बाबुआमाले छोराछोरीलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर तिनुपरे के होला ? | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
बाबुआमाले छोराछोरीलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर तिनुपरे के होला ?
काठमाडौं, भदौ २२ । उद्दोगी बिनोद चौधरीले गम्भीर प्रश्न उठाए । परिवारका सदस्यलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा समेत कर तिनुपर्ने भएमा के होला ? प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रश्न गर्ने उनले उत्तर पनि आफै दिए । यसले गम्भीर सामाजिक चुनौती देखिनेछ ।
छोराछोरीले पैत्तृक सम्पत्ति प्राप्त गर्दा पनि करको व्यवस्था छँदैछ । अब सम्पत्ति हस्तान्तरणमा पनि जग्गाको मूल्यांकन हेरेर कर लिने नीति ल्याउन लागिएको छ । यसअघि पनि सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर शुरु गरिसकिएको छ । यसले समाजमा चुनौतीहरु बढ्न सक्ने तर्क चौधरीले गरे ।
देशमा निर्यात घट्दो रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । फल देखि फूलसम्म, कृषिजन्य वस्तुहरु छ खर्बको आयात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसले गम्भीर परिणाम उत्पन्न हुने बताए । चौधरीले लगानीको वातावरण बिगारेको देखि करको मारमा जनतालाई पारिएको विषय उठाउँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हाँसिमात्र रहे ।
काठमाडौँ, १२ फागुन : आइतबार उच्च अङ्कले बढेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक
काठमाडौँ, १२ फागुन : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा
रसुवा, १२ फागुन : जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्नेक्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ
जो बाँस्कोटाका योजनाकार थिए
काठमाडौँ, १२ फागुन । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा
विदेशको पीडाले स्वेदशमा मिहिनेत
काठमाडौँ, १२ फागुन । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका अन्तर्गत भालुफाँटामा स्थानीय युवाले मिलेर व्यावसायिक रूपमा भेडेखुर्सानीको
भुरा र दानामा अनुदान माग
काठमाडौँ, १२ फागुन । माछापालक किसानले पोखरी निर्माणभन्दा माछाको भुरा र चारोमा अनुदान दिनुपर्ने माग
काठमाडौँ, १२ फागुन । चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको